Jaaliyada Puntland oo Toronto shir ku yeelatey & madaxweynaha PL oo khadka… – SBC
Jaaliyada Puntland oo Toronto shir ku yeelatey & madaxweynaha PL oo khadka…
Madaxweynaha Puntland, Dr Abdirahman Sh Mohamud (Faroole) oo ka qeyb galay shirweynihii Jaaliyadda reer Puntland ee Magaalada Toronto. Shirkan oo aha mid aad loo soo agaasimey ayna ka soo qeybgaleen boqolaal isugu jiray bulshada reer Puntland qeybaheeda kala duwan ayaa waxaa khadka telephonka uga qeyb galay Madaxweyne Faroole. Madaxweynaha ayaa salaam diiran u soo jeediyey dadkii soo qaban qaabiyey shirkan lagu taageerayey Dowladda Puntland iyo hogaankeeda Madaxweyne Faroole.
Madaxweynaha oo la hadlayey bulshada reer Canada ayaa warbixin ka siiyay Jaaliyadda arrimo dhowr ah; Amniga Puntland: Madaxweynuhu wuxuu sheegay in wax badan laga qabtay, colaado badan oo Puntland lala damacsanaa in laga hor tagey, lagan adkaaday kuwii soo abaabulayey. Inkastoo, weli dagaamada qaarkood weli si gaadmo ah oo fuleynimo ah dad lagu laayey. Haddana, Madaxweynuhu wuxuu Jaaliyadda u sheegay in Dowladdiisu ay qaadayso talaabo kasto oo amniga wax looga qabanayo. Madaxweynaha oo ka hadlayey isbeddalka Maamulka Gobolka Mudugh, gaar ahaan Magaalada Galkacyo ayaa sheegay, in Sanadkii 2009 ay maamulkiisu fadhiyeen muddo laba bilood ah, kadibna halkaas lagu dhisay golihii degaanka. Madaxweynaha ayaa sheegay in ay wax qabteen, balse waxbadan oo laga sugayey aysan fulin. Sidaas darted, asgagoo eegaya baahida shacabka reer Gaalkacyo; u magacaabay Guddi cusub; Isla mar ahaantaansa siiyey awood shaqo ee buuxda. Jaaliyadda ayaa sacab iyo sawaxan ku taageertay go’aankii Madaxweynaha. Abaaraha dalka ka jira:
Madaxweynuha ayaa sheegay in abaar balaaran ay ku habsatay in badan oo gobolada dalka Soomaaliya ka mid ah. Iin Dowladiisu ay dadaal badan ugu jirto sidii loo taakuleyn lahaa dadka abaaraha ku tabaaloobay. Sidoo kale, Madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay Jaaliyadda in ay kordhiso dadaalkooda gacan waxtarna u geystaan walaalahooda abaaruhu wax yeeleeyeen. Jaaliyadda Dibedda: Madaxweynuhu wuxuu ku gubaabiyey in ay ayaga iyo ubadkooduba kaa faaiideystaan oo wax bartaan, dhaqankooda iyo diintooda ilaashadaan. Kana qeyb qaataan dhismaha iyo wanaagga dalka ay degeen iyo dadka ay la nool yihiin. Madaxweynuhu wuxuu ku dhiiri geliyey Jaaliyadda cidii doonaysa in ay maalgashato Soomaaliya in Puntland gacma furan lagu soo dhowynayo.
Sidoo kale, Madaxweynuhu kula dar daarmay Jaaliyadda Puntland in ay adkayso midnimadeeda iyo tan Soomaaliyeedba. Dr Kristy Duncan: Madaxweynaha ayaa khadka telephonka kula hadlay, haweeneyda laga soo doorto degaanka Soomaalida ee Etobicoke North, ugana mahad celiyey sidii waddanka Canada u soo dhoweeyey una dejiyey Jaaliyadda Soomaalida dhamaantoodna loo siiyey sharci iyo dhalashoba. Sidoo kale, Dr Duncan; ayaa uga Mahad celisay Madaxweynaha hadalkiisa diiran iyo salaantiisa. Waxayna balan qaaday in kolkii ay suurta gasho ay booqan doonto Puntland. Siyaasadda Dibedda:
Halkan ka daawo sawirada shirka:
Madaxweynaha ayaa warbixin ka bixiyey shirkii wada tashi ee bishan horaanteedii lagu qabtay Magaalada Nairobi.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in shirkaasi ahaa wada tashi, ee aan Dowlad lagu dhiseyn, mid jirtana lagu dumineyn. Balse, ujeedadu ahayd, maadama wakhtigii dowladda dhexe ee ahaa KMG uu dhamaanyo. In laga tashado ayaaha Soomaliya iyo sidii dalka Dowlad rasmi ah loogu soo dhisi lahaa. Madaxweynaha ayaa sheegay in Puntland ay soo jeedisay talooyin iyo macluumad dan u ah dib u yagleelidda qarankii Soomaaliyeed. Intaas kadib, Jaaliyadda ayaa sacab, mashxarad iyo farxad ku taageertay go’aankii geesinimada lahaa ee Madaxweyne Dr Abdirahman Sh Mohamud Faroole. Go’aankii Jaaliyadda: Jaaliyadda iyo dhamaan dadkii ka hadlay madasha ayaa si wadajir ah u taageeray go’aankii Dowladda Puntland ee ku aadanaa shirkii wada tashiga ee Soomaaliyeed ee lagu qabtay Magaalada Nairobi, Kenya iyo Casumaaddii Madaxweynaha Puntland uu ku yaboohay in Shirka Soomaaliyeed lagu qabto dalka gudihiisa; gaar ahaan meel nabad ah sida Puntland. Jaaliyadda ayaa ku bogaadisay Madaxweyne Faroole talaabadii uu ka qaaday Maamulka Gobolka Mudugh iyo kan degmada Gaalkacyo.
Jaaliyadda ayaa soo dhoweysay talooyinkii wax ku ool ka ahaa ee Madaxweynuhu kula dar daarmay Dhalinyarada iyo waalidiinta reer Puntland. Jaaliyadda ayaa soo jeedisay adkeynta iyo difaaca soohdimaha Puntland ku maqan iyo kuwa carqaladda lagu hayo. Jaaliyadda ayaa ku baaqday in Dowladda Puntland laba laabto dadaalka loogu jiro difaaca soohdimaheeda iyo xuduudaheeda. Jaaliyadda Puntland ayaa Dowladda iyo shacabka Puntland ku amaantay soo dhoweynta kumanaanka kun ee Soomaaliyeed eek u nool kana shaqeysta Puntland dhexdeeda.
Madaweynaha Puntland, Dr Abdulrahman Sh Mohamud (Faroole) President of PDF, Abdullahi Isse Master of Ceremony – Burhan DIO MIO Osman Ahmed Ali, President of SCEA Mohamed Dahir, Producer of Somali TV and Radio Saciid Abdirahman Orey, Public Relations Officer Shukri Jama, Public Relations Officer Nuur Kidaare, Public relations Mahmoud Khalif Ahmed (Caydiid) Technical and Podcasting Ali Bakri, Video Productions
Mahmoud Khalif Ahmed
madaxweyne nolow ayan ku lenahay cimrigaga ha rago